Maxay Tahay Sababta Looga Baxaayo Tubaakada - 802Quits
SABABAHA LOO JOOJIYO
Maxay Tahay Sababta Looga Baxaayo Tubaakada
U Diyaar Garowga Joojinta
Waxaan rabaa inaan joojiyo
Samee Qorshahaaga Joojinta
Hel Caawinaad Joojinta
Reer Vermont uurka leh
Baro bilaash ah, Xanjo & Lozenges
Qalabka Joogitaanka Fun
Sida loo maareeyo Jaceylka
Bogga ugu weyn » Vermonters » SABABAHA LOO JOOJIYO » Maxay Tahay Sababta Looga Baxaayo Tubaakada
Waa Maxay Sababta Ay Ku Adag Tahay Inaad Joojiso Tubaakada
In kasta oo aad rabto inaad joojiso, waxaa jira laba sababood oo kaa dhigi kara inay kugu adkaadaan:
1.Sababtoo ah isticmaalka tubaakada ayaa ah mid balwad badan leh sidaa darteedna maahan kaliya caado, waxaad ubaahantahay jimicsi nikootiin Waxaad la kulantaa ka-tagidda nikotiinka marka aad waqti dheer qaadatid sigaar ama sigaar elektaroonig ah, tubaakada la ruugo, buunshaha ama vape. Jidhkaagu "wuu kuu sheegayaa" tan markaad damacdid. Hammuunku wuu tagaa markaad ku qanacdo balwadda adoo iftiiminaya ama isticmaalaya nooc kale oo tubaako ah. U diyaar garow inaad wax ka qabato tan adoo kudaraya balastarro bilaash ah, xanjo iyo lozenges ama daawooyin kale oo joojiya qorshahaaga joojinta loogu talagalay
2.Waxaa laga yaabaa inaad balwad ku leedahay ficil ahaan isticmaalka tubaakada. Maaddaama jirkaaga uu soo kordhayay baahida jirka ee nikotiinta, waxaad naftaada ku baraysay inaad sigaar cabto, wax calaasho ama aad ubogto, isla markaana aad naftaada u tababbarto isticmaalka tubaakada xaalado badan oo kala duwan. Tilmaamahan xaaladdu waa laga gudbi karaa haddii aad horay ugu sii diyaargarowdid.
Ogaanshaha sida aad u jeclaan laheyd inaad wax uga qabato waxyaabaha kiciya sida kuwa hoos ku taxan ka hor intaadan la kulmin iyaga oo ah kuwa aan sigaar cabbin waxay kaa caawin doontaa inaad dareento kalsooni.
Cabitaanka qaxwada ama aalkolada
Ku hadalka taleefanka
Inta lagu jiro waqtiyada walaaca, dood, niyad jab ama dhacdo xun
Wadista ama fuulida gaariga
Inaad ag joogtid saaxiibbadaada, dadka aad isla shaqeysaan iyo dadka kale ee caba ama isticmaala waxyaabaha kale ee tubaakada
Ku dhex-dhexaadinta xafladaha
Ka waran Sigaarka E-sigaarka?
Sigaarka elektaroonigga ah ayaa ah ma oo ay ansixisay Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Maraykanka (FDA) inay tahay gargaar joojinta sigaarka. Sigaarka elektaroonigga ah iyo nidaamyada kale ee nikotiinta lagu soo gudbiyo (ENDS), oo ay ku jiraan uumiga shaqsiyeed, qalimaanta vape, e-cigaar, e-hookah iyo qalabka uumiga, ayaa dadka isticmaala u soo bandhigi kara qaar ka mid ah isla kiimikooyinka sunta ah ee laga helo qiiqa sigaarka ee guban kara.
Maxaa kiciya rabitaankaaga isticmaalka tubaakada?
Qor waxyaabaha kugu kici kara oo ka feker sida ugu wanaagsan ee mid walba loo maarayn karo. Istaraatiijiyaddu way fududaan kartaa, sida inaad iska ilaaliso xaaladaha qaarkood, xanjada ama nacnac adag ay kula joogto, inaad ku beddesho shaah kulul ama aad barafka ku calaliso, ama aad dhowr neefsato oo qoto dheer.
Daahintu waa tab kale. Markaad isu diyaarineyso inaad joojiso sigaar cabista, xiiqitaanka ama isticmaalka tubaakada kale, ka feker goorta sida caadiga ah aad sigaarka u cabto, calaaliso ama aad ubaxdo maalinta oo aad isku daydo inaad taas dib u dhigto inta aad kari karto Xitaa dib u dhigis waqti yar, iyo kordhinta maalin kasta illaa taariikhda joojintaada, waxay yareyn kartaa hamiga. Tilmaamaha iyo fikradaha ku saabsan sida loola macaamilo waxyaabaha kiciya, hubi Joogitaanka Joogitaanka.
Samee Qorshahaaga Joogtada ah ee Joogtada ah
Kaliya waxay qaadataa daqiiqad inaad sameysid qorshe joojineed oo adiga kuu gaar ah.
Samee Qorshahayga Joojinta>
Marka 802Quits tixraacyada tubaakada ku saabsan degelkan, waxaan ula jeednaa tubaakada ganacsi, ee macaash doonka ah ee loo soo saaray madadaalo iyo adeegsiga caadada ah ee aan ahayn tubaakada muqadaska ah iyo tan dhaqameed ee loo isticmaali karo ujeeddooyin ama daweyn caafimaad oo ay leeyihiin qaar ka mid ah bulshooyinka Hindida Mareykanka.
Wac Si Aad Isqorto
Isku qor khadka tooska ah
© WAAXDA WAQTIGA CAAFIMAADKA.